Ny famafazana Silicone emulsion PR160
Ampiasao: Fluffing Silicone emulsion PR160 dia emulsion silicone organika manokana ary ny akora fototra amin'ny rafi-pandrafetana RaisingAgent ho an'ny lamba nided. Azo ampiasaina amin'nyRaising, Famandrihana sy famerenam-bokatra vita amin'ny landihazo, T / C, polyester, nylon ary ny lamba itambarany. manondraka volo malefaka, malefaka, malama sy manangirana entona hanangana lamba. Azo ampiasaina amin'ny fitambaran-tsolika amin'ny flake amin'ny habaka samihafa izany arakaraka ny toe-javatra vita amin'ny lamba.
Ny lamba lamba dia vita amin'ny alàlan'ny fizotry ny famonosana, antsoina koa hoe fampiakarana na hanosotra. Ny velaran'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny pataloha na raikitra dia notolorana tamin'ny borosy mba hamoronana malemy sy malefaka. Ny ohatra mahazatra dia misy volonondry, moleskin, ary volon'ondry polar.
Ny folaka dia atao amin'ny alàlan'ny famafazana lamba vita amin'ny polyester izay miteraka haingam-pandeha ary manangana poketra rivotra ho an'ny insulasi. Fleece dia manome salan'isa malefaka mahery vaika kokoa raha ampitahaina amin'ny volon'ondry Merino fa ambany noho ny hidina midina na fitaovana famenoana synthetic.
Ny fametahana dia dingana iray izay azo ampiharina amin'ny woollens, kafe, satroka spun, ary rayon-dronono, anisan'izany ny voany sy ny karazana knitted, mba hanondrahana velirano, malefaka malefaka. Ny fandehan-javatra dia misy ny fampitana ny lamba vita amin'ny cylinder mihodina izay tariby tariby tsara izay manainga ny fibra fohy sy malefaka, matetika avy amin'ny zaran-tenona, mankany amin'ny tany. Ny dingana, izay mampitombo ny hafanana, dia ampiharina matetika amin'ny lozam-boninkazo sy ratsy indrindra ary amin'ny lamba firakotra koa.
Bika Aman 'endrika: Rano fotsy masira
Ionicity: tsy ionic
Vidiny PH: 6 ~ 8
Solubility: mihena anaty rano
Toetoetra sy fampiharana:
1. Tsara malefaka, malefaka, fluffy mahatsapa vokatr'izany, ataovy mora fluffing ny lamba;
2. Misy fiantraikany kely eo amin'ny alokaloka miloko, ny fahadiovana ary ny fifadian-kanina loko
3. Rehefa vita ny vita dia malama sy mientana ny gorodona, mahazo tumpy sy fanamiana mitovy
4. Azo ampiasaina miaraka amin'ny ankamaroan'ny fanalefahana silicone sy mpanampy fandokoana hafa amin'ny dobo iray, amin'ny ankapobeny
ampiasaina amin'ny dingana famaranana
Fampiasana sy Dosage:
Ao anaty fitoeran-javatra dia ampirimo amin'ny rano mafana ny flake ary ario tanteraka. Ary avy eo, ampio Fluffing
Silicone Emulsion amin'ny zoro, afangaraho tsara ary ampiasao aorian'ny fanivanana
1. lamba vita amin'ny polyester (Loban'ny vatohara sy volon'ondry polar)
Malemy kation cationic 25kg, ampio PR160 eo ho eo amin'ny 50kg, mifangaro amin'ny 1000kg; Fatra: 40-50 g / l
2. lamba vita amin'ny landihazo
Malemy kation cakeic 40kg, ampio PR160 eo ho eo amin'ny 70kg, mifangaro amin'ny 1000kg; Fatra: 40-50 g / l
3. lamba vita amin'ny T / C (80/20 na 65/35)
Malemy kation cationic 30kg, ampio PR160 eo ho eo amin'ny 70kg, mifangaro amin'ny 1000kg; Fatra: 40-50 g / l
4. DTY (Manaova kofehy vita amin'ny soratra) vita amin'ny lamba
Malemy kation cationic 25kg, ampio PR160 eo ho eo amin'ny 50kg, ampio ny silicone emulsion 10-20kg,
mifangaro amin'ny 1000kg; Fatra: 40-50 g / l;
Ho an'ny lamba miolakolaka dia hosolo ny flake malemy amin'ny flake tsy misy ionik
Fanamarihana: ny angona etsy ambony dia ho fanondroana, miankina amin'ny tena fizotrany
Fonosana: nomena ao amin'ny 200kg Drum na 1000kg IBC
Ny fiainan'ny talantalana mahazatra dia 12 volana manomboka amin'ny datin'ny famokarana ary voatahiry ao am-boalohany tsy nosokafana
fitoeran-javatra 2℃~ 30℃. Azafady zahao ilay taratasy fangatahana fitahirizana sy datin'ny lany daty
Previous: D4 D5 D6 Maimaim-poana Siloxanes
Agence; emulison silicone fluffing
Agent fampielezana fampihenana ny fandokoana polyester
Mpanentana fanentanana ho an'ny loko loko sy asidra mialoha